Maxkamad ku taalla Galmudug oo toogasho ku xukuntay labo askari - Halbeeg News
Maxkamad ku taalla Galmudug oo toogasho ku xukuntay labo askari
DHUUSO MAREEB (HALBEEG ) – Maxkamad ku taalla Galmudug ayaa dil toogasho ah ku xukuntay labo askari oo ka tirsan Ciidamada Xoogga Dalka, kuwaas oo biishii hore ee August 13keedii dil u geystey askari kale.
Wasiir Ku Xigeenka Cadaallada ee Galmudug Maxamduud Guure Guuleed, ayaa sheegay in labada askari ee la xukumay oo lagu kala magacaabo Burhaan Waranle iyo Cabdirasaaq Tahliil ay deegaan lagu magacaabo Been-Dhaarte ku dileen askari kale oo lagu magacaabi jirey Cabdullaahi Ciise.
“Maxkamaddaasu waxay bilaabatay kowdii bisha sagaalaad, waxay ka bilaabatay xerada gaaska, dacwaddu waxay socotey saddex maalmood, labadaas eedaysane Burhaan Waranle iyo Cabdirasaaq Tahliil waxaa lagu xukumay dil toogasho ah, maadamaa midna uu qirtay in uu xabadda ku bilaabay, midna markhaantiyo ku caddeeyeen” Wasiir Guure ayaa yiri.
Saddexda askari ayaa la socdey gaari nooca xammuulka qaada ahaa oo ari sidey, kaas oo ku sii jeedey dhanka magaalada Gaalkacayo, wuxuuna dilku yimid kaddib markii muran soo kala dhex galay askariga geeriyoodey iyo labada kale.
Gacan ku dhiigleyaasha ayaa dilka kaddib xoog ku kaxaystay gaarigii xammuulka ee ay ku safrayeen. Gaariga ayaa markii dambe kula qallibmay jidka dhexe, inkastoo iyaga oo bed qaba ay goobta shilku ka dhacay ka baxsadeen, waxaana 48 saac kaddib laga soo qabtay duleedka magaalada Gaalkacayo.
Maxkamadeynta labada askari oo ka dhacday Ceelgaras, waxay ahayd mid ku cusub deegaannada Galmudug, maadaama maxkamadda ciidamada qalabka sida weli laan ka sameysan deegaannada Galmudug.
Guddoomiyaal iyo garsoorayaal loo magacaabay maxkamadaha gobolka Banaadir
Kenya oo dalkeeda ka musaafurineysa 163 qof oo u dhashay Pakistan